UReikerink akafuni ukusola izitobha zakhe ezibaqhathe nenduku kwiPirates - Impempe
UReikerink akafuni ukusola izitobha zakhe ezibaqhathe nenduku kwiPirates
UTerrence Mashego ongomunye wezitobha zeCape Town City ezishaye into ephansi kwi-Orlando Pirates
Iqembu lakhe selingenelwe amagoli angu-23 emidlalweni engu-15 kwiDStv Premiership okuyirekhodi elibi kodwa umqeqeshi weCape Town City, uJan Olde Reikerink uyenqaba ukusola izitobha zeqembu lakhe ngalokhu.
Izitobha zeCitizens zihlakazeke kalula ngesikhathi i-Orlando Pirates ibashaya ngo 2-0, futhi ukube beyingawashwebi amanye amathuba ngabe abe maningi amagoli.
Kuyithathe imizuzu emihlanu umdlalo uqalile iBucs ukuthi ihlohle amagoli ayo, esebenzisa ukunwabuzela kwezitobha zeCity ukuzibeka endaweni engcono kulo mdlalo obuse-Orlando Stadium ngoLwesibili.
“Kumele siqhubeke nabadlali esinabo,” kusho uReikerink ebuzwa ukuthi ngabe unazo yini izinhlelo zokuqinisa emuva. “Sinenqwaba yabadlali abahle uma kuhlaselwa, ngeke ngibasole namuhla ngoba nakhu sekwenzeke kanje.
“Inkinga iba sekutheni uma belahlekelwa yibhola lokho kusishiya siyinhlakanhlaka, yingakho ke ngingeke ngithi inkinga yezitobha ngoba eyeqembu lonke.
“Asinabo abadlali abakwazi ukumaka esiswini njengePirates ebinababili ababegade udonga lwabo lwasemuva uma abahlaselayo belahlekelwa yobhola,” kuchaza lo mqeqeshi waseNetherlands.
“Thina sinabadlali abahle uma kuhlaselwa futhi yilokho okube wumehluko phakathi kwethu nePirates. Yingakho futhi sidlala ibhola elihle siwashaya namagoli.
“Okumele sikulungise wukuthi senza njani uma sesilahlekelwe yibhola, lokho kunzima ukwedlula ukuthola izitobha ezintsha,” kubeka yena.
Uthe ukushesha kweBucs ukushaya amagoli kubacindezelile, kwabaphoqa ukuthi bashintshe kwabebekuhlelile, nokuyingakho iminyakazo yabo beyingahlangani kahle.
“Akujwayelekile (ukungenelwa amagoli ngokushesha okunjeya). Ngiyacabanga ukuthi kubacindezelile abadlali bami njengoba kuphoqeleke ukuthi sijike izinhlelo kusaphele imizuzu emihlanu umdlalo uqalile.”
ICity ayizophindela eKapa njengoba ngoMgqibelo inomunye umdlalo eGauteng. Izobhekana neSuperSport United eLucas Moripe Stadium emdlalweni weligi uReikerink athe uzoba nzima.
NaMatsatsantsa a Pitori azitholele isibhaxu emdlalweni obungoLwesibili eDr Petrus Malimela Stadium eMangaung, eshaywa yiBloemfontein Celtic ngo 2-1.
Previous Previous post: IPirates isheshe yaqeda ngeCitizens ‘ebisatshwa’
Next Next post: Selivunyelwe ibhola ezigabeni eziphansi